Daahida Shiinaha IP67 wuxuu hogaaminayay soosaarayaasha laydhka xargaha iyo alaab-qeybiyeyaasha. Huayuemei
Shayga Daaha Wareegga Biyaha ee Biyaha
Faahfaahinta 277.2 * 16.8 * 1.6mm
Cabbirka LED-ka SMD3030
CRI 80+, Waa la habeyn karaa
Midab xumida 2800-12000K (la habeeyay)
Awood 3.6w / kumbiyuutarada
Iftiinka dambe ee shaashadda LED-ka (daah LED ah, silsilado bamboo LED ah); LATTICE LED Matrix Lighting System waa xalka iftiiminta ugu badan ee wax ku oolka ah ee armaajooyinka gudaha iyo dibedda iyo iftiiminta aagga ballaaran.
Naqshad casriyeyn ah oo ah nidaamka LATTICE wuxuu ku yimaadaa duubyo fudud oo si sahlan loo rakibo, taas oo u oggolaanaysa dadweynaha sahlan ee LED-yada si fiican u kala jaban daqiiqado loogu talagalay nalka tooska ah
Iftiinka dambe ee shaashadda LED-ka iyadoo la adeegsanayo hufnaan sare oo horseed u ah muraayadaha hore ayaa u oggolaanaya moolka ugu hooseeya, sii deynaya Nuurka lebiska, iyada oo aan dhibco lagu arkin dusha calaamadaha;
Iftiinka iftiinka LED-ka ee sanduuqyada nalka wuxuu u adeegsadaa moduleka nalalka halbeegga hal-dhinac ee kabadhada calaamadaha iftiimiya, guddiga xayeysiinta, guddiga muujinta iyo dhowr nooc oo guud ahaan codsiyada nalalka gadaal ee hal dhinac ah;
Lattice modules gadaal oo leh dhalaal aad u fiican marka la isticmaalo koronto yar, Ku habboon darbiyada gadaal ama sanduuqyada wejiga hal weelka ah ee xirmooyinka laydhka;
Iftiinka dambe ee shaashadda LED-ka oo wata naqshad casri ah ee nidaamka laastikada ayaa ku yimaada miisaan fudud, Rakibaadda Fudud ee Shaqaalaha;
Nalalka iftiinka LED-ka ee loogu talagalay sanduuqyada iftiinka leh qaab cusub oo la hagaajiyay ee shaashadda asalka ah, oo leh natiijooyin iftiin oo la isku halleyn karo oo la saadaalin karo, kalsooni dheeraad ah, cimri dherer, iyo tikniyoolajiyad joogto ah oo joogto ah.
Faa'iidooyinka & Adeegyada
1. Waa Daaha Wareegga LED-ka oo aan biyuhu xirin. Ku habboon sanduuqa iftiinka dibadda.
2.Adopt wax taaj oo kale duray buuxa, fasalka biyuhu waa la gaari karaa IP67.
3. Isaga oo u baahan qalab yar oo aan khibrad lahayn, Daaha biyuhu wuxuu daaha ka rogi karaa si fudud oo loo qaabeyn karaa cabir ama qaab kasta ha noqdee
4. Iftiiminta dharka, iska ilaalinta meelaha kulkulul.
5.Waxaan kari karnaa sida aad u codsatay inaan kuu sameyno xalka ugu fiican adiga.
Adeegyada 6.OEM & ODM.
7.Garanti waa 3 Sano.
8. Waxaan u siineynaa macaamiisheenna agab iyo badeecooyin u habboon deegaanka.
Waxay ku habboon tahay xayeysiinta sanduuqa nalka dharka & unugyada xargaha, ikhtiyaar ku habboon xayeysiinta sanduuqyada Iftiinka / Muuqaalka Calaamadaha Muuqaalka Muuqaalka… sidoo kale codso dukaanka silsiladda, hoteelka, xarunta laga dukaameysto, tareenka dhulka hoostiisa, garoonka diyaaradaha, istaandarka iwm. ,Khaanadaha waaweyn ee Xayeysiinta ah, Boodhadh Gudaha Ka Iftiimay, Meelaha Muujinta Calaamadaha Waaweyn, Hal Saxeex iyo Laba laab, Sanduuqyada waaweyn ee Boosta.
Hore: RGB 3030 Daaha LED Strip
Xiga: 3030 lattice led strip
Guddi Hoosaad Iftiiminta
Isha iftiinka gadaal
Guddi Backlight Panel baahin
Iftiiminta Korantada Led
horseeday xargaha iftiinka
SMD3030 Daaha LED Strip
RGB 3030 Daaha LED Strip
IP65 jaranjarada ayaa horseeday nalka xargaha
matrix hogaaminayo gadaal gadaashiisa